मरेजको मिस पेनाल्टीमा सिटी र लिभरपूल अंक बाडे !! साताको प्रिमिएर लिग पूर्ण नतिजा यस्तो देखियो - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रिमिएर लिगका ठुला टोलिबीच मायान्चेस्टर सिटी विरुद्ध लिभरपूल गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ। एनफिल्डमा भएको उक्त खेलमा दुवै तर्फबाट कुनै गोल हुन सकेन भने सिटीका रियाद मारेजले ८६ औ मिनेटमा पाएको पेनाल्टी मिस गारेका छन्।
दुवै हाफमा कुनै गोल नहुदा अंक तालिकामा ३ टिम चेल्सी, लिभरपूल र सिटी २० अंक बटुल्दै पहिलो, दोस्रो, र तेस्रो आवस्थामा छन्। गोल आधारमा सिटी अग्र स्थानमा रहेको छ।
इन्टरनासनल ब्रेक अगीको यस सिटी विरुद्धको खेलमा लिभरपूलले अंक जोड्न सकेन। साथै एनफिल्डमा ठुलो जमातमा रहेको घरेलु समर्थक रहेको मैदानमा कुनै जादु देखाउन सकेन तर दुवै टिमले अंक बढ्दा दुवैका कोचलाई अमिलो भने पक्कै मान्न सकिन्छ।
चेल्सी विरुद्ध साउथह्यामटन
जारी प्रिमिएर लिग फुटबल खेल अन्तर्गत आज भएको म्याच डे ८ खेलमा चेल्सीले साउथह्यामटन माथि सेन्ट. मेरिज स्टेडियममा सहज जित हासिल गरेको छ। उक्त खेलमा एडेन हाजार्ड, बार्क्ले, मोराटाले एक एक गोल गर्दै टिमलाई ३-० को जित दिलाएका छन्।
ओलिभर जिरुडको पासमा बार्क्लेले दोस्रो गोल गरेका थिए, यस खेलसंगै जिरुडको प्रिमिएर लिगमा २०० औ खेल सम्पन्न भएको छ। खेलमा पहिलो गोल हाजार्डको थियो साथै उनको एस्सिस्टमा मोराटाले गोल गर्न सफल भएका थिए।
हाजार्डको यस गोलसंगै हालसम्म ७ गोल भएको छ भने २ एस्सित रहेको छ। यस खेलसंगै चेल्सी ८ खेलबाट २० अंक जोड्न सफल भएको छ। ८ औ खेलसम्म चेल्सीले २ खेल मात्रै ड्र खेल्दै बाकी खेलमा जित हासिल गरेको छ।
घरेलु टिम साउथह्यामटन भने ८ खेलबाट ५ अंक जोड्दै तालिकामा १६ औ स्थानमा रहेको छ। खेलमा क्लिन सिट प्राप्त गरेको चेल्सीका निम्ति गोल रक्षकले २ निकै धारिलो गोल सट बचाऊ गरेका थिए। उनि हालै मात्रै चेल्सी ७१ मिलियनमा ट्रान्सफर भएका थिए। उनले पूर्व किपर थियाबूट कोतुवालाई पछाडी छोड्न सक्ने प्रभाब देखाएका छन।
खेलमा घरेलु टिमले ६ पहेलो कार्ड खादै कुनै गोल गर्न सकेन।
म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध न्युक्यासल